हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि अ’तिक्रमण गरेको छैन :मन्त्री ज्ञवाली,के भन्नू हुन्छ नी तपाईं ? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि अ’तिक्रमण गरेको छैन :मन्त्री ज्ञवाली,के भन्नू हुन्छ नी तपाईं ?
काठमाडौं । सरकारले हुम्लाको लिमी उपत्यकामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण नपरेको बताएको छ । पछिल्लो समय चीनले ।नेपाली भूमिमा भवनहरु बनाएको खबर आएका बेला सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनका अनुसार यस्तै खबर २०७३ मा पनि आएको थियो । त्यसबेला सरकारले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय, नापी विभागलगायतको संलग्नतामा टोली बनाएको र त्यसले स्थलगत गरेको भन्दै उनले भने, ‘बनेका घरहरु नेपाल–चीन सीमाबाट एक किलोमिटरभित्र चिनियाँ भूभागमा ।
बनेको पाइएको रहेछ ।’अहिले त्यही ठाउँमा थप भवन बनेको हो ।पाथिभार डेलि डटकम बाट
Previous यस कारण अधुरो नै रहने भयो खानेपानीमन्त्री बिना मगरको मेलम्चीको पानी राजधानीमा ल्याउन,हेर्नुहोस!
Next मृ’त्यु भएकाहरुको छोरी बन्दै सपना, ४५ जना वेवारिसे’लाई दिईसकिन् दागबत्ती !(भिडियो सहित)